निधन हुनु भन्दा पहिला सुनील दत्तले परेश रावलाई लेखेका थिए यो चिठ्ठी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
निधन हुनु भन्दा पहिला सुनील दत्तले परेश रावलाई लेखेका थिए यो चिठ्ठी
मुम्बई। फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानीको फिल्म ‘संजू’ बक्स अफिसमा निकै रुचाइएको छ। संजय दत्तको जीवनको ३७ वर्षको कहानी देखाइएको यो फिल्ममा रणवीर कपुर मुख्य भूमिकामा छन्। फिल्ममार्फत संजू बाबा र उनका बुवा सुनील दत्तबीचको सम्बन्धलाई राम्रोसँग देखाइएको छ।
केही समय पहिला परेश रावलले इण्डियन एक्सप्रेससँगको कुराकानीका क्रममा यो विषयमा बताएका थिए। परेश रावलका अनुसार सुनीलले निधन हुनु भन्दा केही अगाडि परेशलाई एउटा चिठ्ठी लेखेका थिए। परेशले यो चिठ्ठी आफ्नो ट्विटरमा पनि शेयर गरेका थिए। चिठ्ठी शेयर गर्दै परेशले लेखेका थिए, ‘यो चठ्ठी मलाइ मेरो जन्म दिनभन्दा पाँच दिन पहिला प्राप्त भएको थियो। त्यही दिन सुनील दत्तको निधन भयो। १२ वर्षपछि जनवरी २०१७ मा मलाइ उनकै रोल अफर भयो।’